တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပညာရေးကဏ္ဍ၌ ယွမ် ၅ ထရီလီယံ သုံးစွဲခဲ့ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပညာရေးကဏ္ဍ၌ သုံးစွဲငွေစုစုပေါင်းပမာဏမှာ ယွမ် ၅.၃ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၃၁.၃ ဘီလီယံ) ရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကထက် ၅.၆၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဏ္ဍ၌ ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုသည် နှစ်အလိုက် တိုးတက်မှု ၇.၁၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်မူ ယွမ် ၄.၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကာ ယင်းနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး (GDP) ၏ ၄.၂၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းများအရ ပညာရေးကဏ္ဍ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုသည် ၉ နှစ်ဆက်တိုက် ဂျီဒီပီ၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းအောက်လျော့ကျမှုမရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China’s spending on education hits5trln yuan in 2020
Source: Xinhua| 2021-11-30 14:55:55|Editor: huaxia
BEIJING, Nov. 30 (Xinhua) — China’s spending on education totaled 5.3 trillion yuan (831.3 billion U.S. dollars) in 2020, up 5.69 percent from the previous year, the Ministry of Education said on Tuesday.
Fiscal spending on the sector grew 7.15 percent year on year to around 4.3 trillion yuan in 2020, said the ministry, noting that the amount was 4.22 percent of China’s GDP in the year.
With the figure, China’s fiscal spending on education had accounted for no less than4percent of GDP for nine consecutive years. Enditem
Photo : Students are attending an online course at an elementary school in Zhongning county, Zhongwei city, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Wang Peng)